Amin'ny fanekena an'Andriamanitra ho mpanome ny fanomezana rehetra
"Isaorana anie ny Tompo Izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro, eny, Andriamanitra Izay famonjena antsika"— Sal. 68:19.
Teo amin'ny fanjakana jiosy, dia nisy fanatitra nasain'Andriamanitra naterina ho Azy rehefa nisy zaza teraka. Amin'izao andro izao isika, dia mahita ray aman-dreny misahirana amin'ny fomba manokana mihitsy mba hanolorana fanomezana ho an'ny zanany rehefa tonga ny tsingerin-taona nahaterahan'izy ireo. Fotoana natokan'izy ireo hanomezam-boninahitra ilay zaza izany, toy ny hoe tokony ho an'olombelona ny voninahitra (...) Noho ny amin'ny fofon'aina, fahasalamana, sakafo ary fitafiana, anefa tsy latsa-danja amin'izany ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, dia tokony hankasitraka ilay Mpanome ny soa rehetra isika. Mendrika ho Azy mantsy ny fankasitrahana noho ireo fanomezana rehetra ireo ka tokony hanao fanati-pisaorana ho an'ilay mpanao soa lehibe isika. Hankasitrahan'ny lanitra izany fanomezana izany.
Raha nozarin'ny ray aman-dreny kristianina hanolotra fanatitra ho an'Andriamanitra ny zanany mba ho fankasitrahan'izy ireo ny fanomezam-pamonjena lehibe nataony ho an'ny olona, dia ho hafa tokoa ny toetry ny tanora. Ho voasarika teo amin'ny Mpamoniy masina ny sainy fa tsy teo amin'ny tenany intsony. Nampianarina hahatsapa izy fa tia azy Andriamanitra ary Izy no loharanon'ny fitahiana rehetra sady fanantenana ny fahasambarana sy ny fiainana mandrakizay.
Raha io karazam-panabeazana io no nomentsika ny zanatsika, dia tsy tokony ho hitantsika manjaka amin'izao andro izao ny fitiavan-tena sy ny fitsiriritana ary ny fialonana. Zatovolahy sy zatovovavy mendrika kokoa no ho hitantsika. Tokony ho tanora mafy orina ara-pitondrantena, manana fitsipi-piainana madio, fomba fisaina araka ny tokony ho izy sy toetra maha-te ho tia no ho hitantsika satria eo anoloan'izy ireo mandrakariva ilay Môdely. Hataony vain-dohan-draharaha ny haka tahaka ny toetra ambony sy miavaka ananan'i Jesôsy Môdely (...) Tian'Andriamanitra hibanjina Azy ny tanora sy ny olon-dehibe ka hino an'i Jesôsy Kristy izay efa nirahiny ka hampitoetra Azy ao am-pony. Hisy aina vao hanaitra ny hery rehetra aorian'izany. Homba azy ireo ilay Mpampahery avy any an-danitra, hanatanjaka azy ao amin'ny fahalemeny sy hitari-dalana azy ao anatin'ny fisalasalany (...) Amin'izany no hampiharihary en anatrehan'izy ireo ny lalana mankamin'ny fiainana. — RH, 09 Desanibra 1890.